IXiaomi Mi 11 Ultra: amaxabiso, amanqaku kunye nephepha lobugcisa | I-Androidsis
IXiaomi Mi 11 Ultra: ixabiso, amanqaku kunye nephepha lobugcisa
UDaniPlay | 31/03/2021 15:26 | Ukuhlaziywa ukuba 31/03/2021 23:44 | Iiselfowuni, Xiaomi
UXiaomi ubonakalisile ukuba yintoni eyona nto iphambili kuye kwi-Mi 11 uthotho, entsha Xiaomi Mi 11 Ultra. Enye yeefowuni eziqwalaselwe njengeyona inamandla kunye nokuyila, phakathi kwezinto zayo ezintsha kukubandakanywa kwescreen sesibini esigxunyekwe ngasemva.
IXiaomi Mi 11 Ultra yabelana ngeendlela ezintathu zemodeli yeXiaomi Mi 11 Pro, ziiprosesa ezinamandla zeSnapdragon 888, isikrini kunye nesona senzwa. Oku kuyaphuculwa zizinto ezithile ezenza ukuba ikhetheke, kubandakanya umzimba omnyama nomhlophe weceramic, ngaphandle kwe-120x zoom yedijithali.
1 Isikrini esiphindwe kabini seXiaomi Mi 11 Ultra
2 Isixhobo sehardware kakhulu ukuya kulo msebenzi
3 Ikhamera yangemuva kathathu yokuthatha eyona mifanekiso ilungileyo
4 Uninzi lokunxibelelana ukuhlala uhlala uqhagamshele
5 Mi 11 Inkqubo yokusebenza ye-Ultra
6 Umthamo omkhulu webhetri kunye nokutshaja ngokukhawuleza
7 Ubukhulu kunye nobunzima beMi 11 Ultra
8 Iphepha lobugcisa
9 Ukufumaneka kunye nexabiso
Isikrini esiphindwe kabini seXiaomi Mi 11 Ultra
Imodeli ye-Ultra ithatha isigqibo sokugcina iphaneli enike iziphumo ezilungileyo, Iscreen se-AMOLED esingu-6,81-intshi ngesisombululo se-WQHD + kwaye zonke zikhuselwe yiGorilla Glass Victus. Ixabiso lokuhlaziya li-120 Hz, isampulu yokuthinta ifikelela kwi-480 Hz, i-1.700 nits yokuqaqamba, i-515 ppi kunye ne-HDR10 +.
Isikrini ngasemva yi-1,1-intshi ye-AMOLED ngesisombululo see-pixels eziyi-126 x 294, I-tactile kwaye inokukhanya kwe-450 nits. Phakathi kwemisebenzi yayo iya kuba kukubona iwotshi, ukongeza iya kuhlala isebenza ukuze ibonise ulwazi olubaluleke kakhulu kumsebenzisi.
Esi sikrini sesibini sibonisa, umzekelo, inqanaba lebhetri yefowuni, iifowuni ezingenayo ezivela kubafowunelwa okanye abantu ongabaziyo, kunye nolunye ulwazi. Kukho ithuba lokugcina ibhetri ngokuchofoza kuyo kwaye usebenze olu khetho ngendlela ekhawulezayo, ngaphandle kokuya kuseto.
Isixhobo sehardware kakhulu ukuya kulo msebenzi
Ukuba iXiaomi Mi 11 Ultra ibalasele kwinto ethile, ikumandla agqithisileyo xa kuthelekiswa nezinye iimodeli, kuba ibandakanya iprosesa enamandla Snapdragon 888 isuka kwiQualcomm, esekwe kwi-chip ye-Adreno 660. Ithembisa ngesona santya siphezulu sombulelo kwii-Cortex cores, ukongeza ekudlaleni nasiphi na isihloko esifumaneka kwi-Android.
Ayithandabuzi xa kufikwa ekusebenzeni kwemisebenzi nge-RAM, kukho inguqulelo ene-8 GB, ngelixa ephezulu ingu-12 GB wohlobo lwe-LPDDR5. Ukugcina kuyahluka ngokuxhomekeka kwisidingo somsebenzisi ngamnye, unokukhetha phakathi kwe-128, 256 kunye ne-512 GB ngesantya se-UFS 3.1.
I-SD888 edityaniswe ne-RAM kunye nokugcina iya kukubeka phezulu kuvavanyo lwee-analytics, ngakumbi ukubona ukusebenza kwe-CPU. I-Xiaomi Mi 11 Ultra yenzelwe abo bafuna abasebenzisi abafuna eyona fowuni ilungileyo, zonke ngexabiso "elifanelekileyo".
Ikhamera yangemuva kathathu yokuthatha eyona mifanekiso ilungileyo
Into enononophelo olukhulu kukufota, uXiaomi ufuna ukukhwelisa ii-sensors ezintathu zangasemva, iyasebenza njengoko zizinto zokusebenza okuhle kakhulu xa uthatha iifoto kunye nokwenza iividiyo. Inzwa ephambili yi-megapixel engama-2 ye-Samsung ISOCELL GN50 Nge-OIS eyakhelweyo, ithembisa iifoto ezicacileyo ngaphandle kokulahleka komgangatho.
Isenzi sensor sesibini yi-megapixel engama-586 ye-Sony IMX48 eya kusebenza njenge- «Wide angle», yenye yezivamvo ezithi ngomgangatho zibonakalise ukuba lelona qabane lilungileyo kwiilensi eziphambili, zonke zinekona yombono eli-128º. Okwesithathu yi-megapixel engama-586 ye-Sony IMX48 telemacro ene-5x zoom zoom, 10x hybrid kunye ne-120x zoom yedijithali.
I-Xiaomo iwupolishe lo mbandela ngee-sensors ezintathu ezingahambi ngaphantsi kwe-megapixels ezingama-48, kodwa kwanelensi ephambili ebonisa ngaphambili ayiphazamisi nantoni na. Inzwa yeselfie zii-megapixels ezingama-20 kwaye njengazo zonke ezinye iya kuhambelana nazo zonke izixhobo zekhompyutha, njengoko ithembisa iifoto ezintle kunye nokurekhodwa okupheleleyo kwe-HD.
Ukurekhodwa kwekhamera ngasemva kukwi-8K HDR10 + isisombululoIkwanayo nenketho yokurekhoda ngokuhamba kancinci kwii-1.920 FPS, ngaphandle kokushiya ezinye iindlela ezibandakanyiweyo kwiifowuni zeXiaomi. Enkosi ngenkxaso yobunjineli, inkampani igqithile kukhuphiswano lwayo ngeelensi ezintathu ezingalinganiyo ngoku.
Uninzi lokunxibelelana ukuhlala uhlala uqhagamshele
IXiaomi Mi 11 Ultra yifowuni exhaswa ngoqhagamsheleko, Ipharamitha ebalulekileyo yokuhlala isebenza esitratweni okanye ekhaya. Unxibelelwano lwe5G luza enkosi kwi-chip ye-Snapdragon 888, imodem yenye yezona zikhawulezayo, ke ukuba phantsi kwenqanaba lolu hlobo kuya kukwenza ubhabhe xa ungena kwi-Intanethi.
Ngaphandle kwe5G iza neWiFi 6E, iBluetooth 5.2, NFC, GPS kwaye yiDual SIM, ukuze ukwazi ukudibanisa amakhadi amabini amancinci, asebenze ngokulula kwifowuni efanayo. I-Bluetooth 5.2 iya kusetyenziselwa ukuqhagamshela iseti yentloko, ukudlulisa ulwazi ngokukhawuleza kwifowuni, ikhompyuter, njl.
Mi 11 Inkqubo yokusebenza ye-Ultra
NjengoXiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Lite kunye noXiaomi Mi 11 Pro Le modeli yakube ikhutshiwe ngaphandle kwebhokisi iya kuqala nge-Android 11, ingxelo yokugqibela yenkqubo yokusebenza. Umenzi ubandakanya uhlaziyo lwamva nje, ke lithembisa ukukhusela kunye nokuphucula isoftware kwiinguqulelo ezizayo.
Uluhlu lwe-MIUI 12.5 lolunye ludityaniswe yinkampani yaseAsia, zonke zinempawu ezininzi ezenza ukuba ivelele kwezinye iinguqulelo. Phakathi kwezinto eziqaqambileyo ze-12.5 kukuphuculwa kwebhetri kunye namanqaku alungiswe ngokupheleleyo ukuze asetyenziswe ngcono.
Umthamo omkhulu webhetri kunye nokutshaja ngokukhawuleza
Asinakuphuthelwa yenye yezinto ezenza ukuba ifowuni ibe yinto yesiqhelo, i I-Xiaomi Mi 11 Ultra inyusa ibhetri ye-5.000 mAh ukugqiba yonke imini yokusebenza. Ithembisa ukuzimela ngokwaneleyo kwimisebenzi yemihla ngemihla, kodwa iyaqhubeka xa isiza kudlala, kuba icinezela wonke umthwalo kwaye ihlala ngaphezulu kweeyure eziyi-8 isetyenziswa ngokupheleleyo.
Ukutshaja ngokukhawuleza kukuthatha ukusuka kwi-0 ukuya kwi-100% kwimizuzu engama-36 ebaliweyo, ngentambo, ngelixa ukutshaja ngaphandle kwamacingo kufana, kwi-67W. Ukuhlawulisa ngasemva kuhlala kwi-10W kuphela, kodwa oku akuphazamisi kuyo kuba ukubona ukuba zombini kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo kuyakwazi ukuyigcina kwi-67W.
Ubukhulu kunye nobunzima beMi 11 Ultra
I-Xiaomi Mi 11 Ultra Inobunzima obungaphantsi kweemilimitha ezili-9, isenza ukuba sibe sesona siphelo siphezulu kwiimarike, ukongeza kubukhulu be-164, x3 kunye ne-74,6. Kule nto wongeza i-ceramic emhlophe kunye emnyama ngombala, iyimveliso enobunzima obuncinci xa sisoloko sinayo.
Ubunzima bale fowuni ye-Ultra ngama-234 gram, ukubona yonke into ephethe ngaphakathi kuyo incinci, nokuba kungenxa yeprosesa, ibhetri, i-RAM kunye nezinye izinto. Yintoni egqithisile, umenzi uzibophelele ekubandakanyeni umkhono we-silicone kwifowuni njengoko yenzile ngezinye iimodeli.
Ukuxhathisa kwe-IP68 kuyakuyenza imelane nobunzulu beemitha ezi-1 zamanzi ubuncinci sisiqingatha seyure, ikwaxhathisa ukutshiza okungamanzi kwaye konke kukhuselwe yiVictus kwiglasi yeGorilla. Iyaxhathisa eluthulini nasekungcoleni, nokuba usebenzisa ifowuni ngaphandle kwetyala elize nayo.
I-Xiaomi Mi 11 Ultra
ISIKHUMBUZO I-6.81 "i-AMOLED ngesisombululo se-WQHD + (3.200 x 1.440 pixels) / 1.1" isibonisi se-AMOLED sesibini / i-120 Hz yokuhlaziya inqanaba / i-480 Hz yokubonisa umboniso / i-Gorilla Glass Victus / i-1.700 nits / 515 ppi / HDR10 +
INKQUBO Qualcomm Snapdragon 888
IKHADI LEGrafiki Adreno 660
i-ram I-8/12 GB LPDDR5
UKUGCINWA KWANGAPHAKATHI Ngama-128/256/512 GB UFS 3.1
IKHAMERA EMVA I-50 MP 8P Isenzi esona sikhulu / i-586 MP IMX48 Isinxibelelanisi esiBanzi se-Angle / 586 48MP IMX48 Isinxibelelanisi seTelemacro nge5x Optical Zoom / 120x Zoom yedijithali / OIS
IKHAMERA ENGAPHAMBILI Isivamvo 20 MP 78º isivamvo
INKQUBO YOKWENZA I-Android 11 ene-MIUI 12.5
IBATTERI I-5.000 mAh + 67 W ukuhlawula ngokukhawuleza
UQHAGAMSHELWANO I-5G / 4G / iBluetooth 5.2 / iWi-Fi 6E / infrared / GPS / NFC / USB-C / Dual SIM
ABANYE Izithethi zeHarman Kardon stereo / Iscreen sokufunda iminwe / isiqinisekiso se-IP68
Ubungakanani kunye nobunzima 164.x3 x 74.6 x 8.38 mm / 234 amagremu
Ukufumaneka kunye nexabiso
IXiaomi Mi 11 Ultra inexabiso nge-1.199 euros yemodeli ye-12/256 GBNgelixa imodeli ye-8/256 GB imalunga nee-euro ezingama-775. Ezinye iinguqulelo ziya kuqinisekiswa nje ukuba zifumaneke kwimarike, ubuncinci yile nto inkampani ibonisile.
I-Xiaomi Mi 11 Ultra ifika kwimowudi yayo ye-12/256 GB (1.199 euros) eSpain. Kuyaziwa ukuba ifowuni iza kufika e-China nge-2 ka-Epreli, kodwa ayaziwa ukuba yeyiphi na imini eyakwenza ngayo kwabanye, ke kuyakufuneka ukuba ulinde umenzi ukuba ayazise ngeendaba zayo ezisemthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi 11 Ultra: ixabiso, amanqaku kunye nephepha lobugcisa
yenzayo Usuku olu-1
Yaxshi ekan zor ekan yoqdi lekn narxi qimmat ekan 😎
Ezona zixhobo zilungileyo zokulinganisa umgama ze-Android
Eyona midlalo mihle yebhola ye-Android